Neefta oo ka soo fuulay irdaha kansarka waxay u gudbeen xarumihii adduunyada la muujiyey way ka soo gudbeen, waxayna ka soo noqdeen albaabbadii laga soo wareegijiray manas, maskaxda sare, shaqsiyad, qof fikir is-miyir qaba, oo u gudba adduun-weynaha.
Zodiac waa saacadda ugu weyn ee xiddigta leh oo meel bannaan aan dhammaad lahayn, taas oo aan caadi ahayn, oo qarsoodi ah, isku wareejisa waqtiga dhalashada Caalamka, cimrigooda iyo suuskoodaba, isla mar ahaantaana go’aamiya beddelaadda unugyada dhiigga ee ku wareega wareegga jirka.
Zodiac waa Kitaabka Quduuska ah ee aan dhammaadka lahayn, taariikhda iyo buugga buugga abuurista, xafididda, iyo baabi'inta wax kasta. Waa diiwaangelinta wixii soo maray iyo kan hadda jira iyo aayaha mustaqbalka.
Zodiac waa jidka nafta laga bilaabo aan la garaneynin iyada oo loo marayo tan la og yahay iyo in aan laga helin gudaha iyo dibadda. Zodiac in la baranayo, iyo taas oo dhan, waxaa ku jira laba iyo labaatan calaamadood ee nin.
Zodiac oo ay wareegsan tahay laba iyo toban calaamadood ayaa fure u siineysa noumenal lama caddeyn ah iyo adduunka oo dhan ee ifafaalaha muujiyey. Sawir xariiq toosan laga soo bilaabo kansarka illaa garka. Markaa calaamadaha kor ku xusan waxay ka dhigan yihiin caalamka aan la muujin; astaamaha ka hooseeya xariiqda tooska ah ee kansarka ilaa loo yaqaan 'capricorn' waxay matalaan adduunka muuqaalka leh ee muuqaal ahaan iyo muuqaal ahaanba iyo muuqaal ahaanba. Calaamadaha cudurka kansarka, burooyinka, iyo maktabaddu waxay matalaan ku xirnaanshaha neefsashada nolosha iyo qaabka, koritaanka qaab jinsi, iyo abuurista neefta dhexdeeda. Astaamaha maktabadda, scorpio, sagittary, iyo capricorn, waxay matalaan isbeddelka neefsashada iyada oo loo marayo jinsi, rabitaan, fikir, iyo shaqsiyad, wareegga muuqaalka, sameynta iyo horumarka neefsashada iyada oo loo marayo dunnida la yaabka leh, iyo soo noqoshada weligeed. noumenal arag.
Haddii xubinta bilaabeysa inay ku dhacdo cudurka kansarka sida neefsigu ay ku guuleysan weydo inay garto aqoon dhammaystiran, sida ku xusan astaan calaamadeedka, ama shaqsiyan, inta lagu jiro iyo ka hor geerida shakhsiyadda "taasoo shaqsiyaddiisu ay ka kooban tahay calaamadaha nolosha, qaabka, galmada, rabitaanka, iyo fekerka - markaa shaqsigu wuu dhintaa shaqsiguna wuxuu leeyahay waqti nasasho ah, wuxuuna markale ku bilaabmayaa neefsasho si loo dhiso shaqsiyad kale. Tani waxay sii socotaa nolosha ka dib nolosha illaa shaqada weyn laqabto ugu dambayntiina shaqsiguna u baahnayn insaan dambe, haddaanu sidaa doonayn mooyee.
Neefku wuxuu ahaa qofkii ugu horreeyay ee soo ifbaxa bilowgii waajibaadka adduunkan; Waxay ku dul martay baddii nolosha oo waxay ku afuuftay firfircoon jeermiga nolosha; wali waxay kufadhiyaan oo ay ka neefsadaan biyaha nolosha, neefsashada waxay u horseeday inay u horseedaan qaab ethereal-astral ah, markii dambe si la taaban karo qaab galmo jir ah, oo ay neefsashada gashay qeyb kamid ah lafteeda. Dabadeed rabitaankii aadanaha ayaa ku jawaabay neefta maskaxda wuxuuna kufuray fikirka aadanaha. Iyadoo fikirku bilaabmay mas'uuliyadda aadanaha; fikirku waa karma. Neefsashada, iyada oo loo marayo fikirka, waxay bilaabeen inay transmute nolosha iyo qaabka, galmada iyo rabitaanka, gantaalka kor u qaadida dhaqaalaha, taas oo ah shaqsiyadda. Si buuxda ugama dhex geli karto jidhka bani aadamka ilaa uu qofku shakhsiyadiisa u dhiibo ilaaheysigiisa dhammaadkiisa.
Shakhsiyanku ma aha nolosha, in kastoo sida neefta ay tahay dadaalkii ugu horreeyay ee neefsashada kaasoo nolosha neef u siiya firfircoonida, go’aaminaya koorsooyinka nolosha, oo xaddidaya meheradda hawlgallada nolosha. Shakhsi ahaaneed ma ahan qaab, in kastoo mid kasta oo ka mid ah shaqsi ahaaneed ee shaqsiyan uu abuuro qaab. Shakhsiyanku waxay u abuurtaa qaab-naqshadeynta shaqsiyadeeda xigta taas oo ah in lagu dhiso nolosha laguna dhalo adduunka iyadoo loo galmoodo. Shakhsi ahaantu ma aha jinsi, in kasta oo ay sababtay in labada qof ee lab iyo dhadig ay ku koraan mid ka mid ah galmada in shaqsiyaddu ay ku dhex gasho, si ay uga gudubto dabka galmada oo ay uga caroodaan ciidamada adduunka, in galmada. shaqsiyaddu waxay isbarbardhigi kartaa dusha sare iyo wareegga neefsashada, waxay noqotaa mid aan caadi ahayn oo awood u leh inay si habsami leh u maareeyso duufaanta asturan, damacyada, iyo galmada kacsiga, galmada si ay u fuliso damacyada qoyska iyo dunida, iyo ilaa iyo inta gudaha Jinsiyadaha galmada si ay isugu dheelitiraan, is waafaqaan, iyo u midoobaan hal abuur, taas oo u muuqata mid ka duwan hawl galkeeda laba geesood sida neefsashada iyo shaqsiyadda, laakiin runtii, waa mid ka mid ah ficilkeeda ugu fiican Shakhsiyaadku maahan rabitaan, in kasta oo ay ka soo kiciso rabitaankeeda xaalad qarsoodi ah oo markaa soo jiidanaysa oo u soo jiidanaysa shakhsiyadda nolol muuqata. Markaa shaqsiyaddu waxay ku shaqaysaa damac, waxayna ka adkaataa caabbinta ay doonayso. Sidaa darteed maskaxdu way sii kortaa oo sii adkaysaa, waana aaladda dhexdhexaadka u ah damaca lagu beddelo doonis (pisces).
Shakhsi ahaanta looma fikiro, in kasta oo ay ku soo saarto fikirkeeda ficilkeeda iyada oo loo maro neefsashada rabitaanka sidaa darteedna ay keento geedi socod silica rabbaani ah, oo ah habka shaqsiyeeduna u adkeysto xanuunka iyo raaxada, saboolnimada iyo taajirnimada, guusha iyo guuldarada foornada tijaabinta ee nadiifinteeda iyo xasilloonida ay ku waara. Maskaxda sare waxay la mid tahay waxa halkan loogu yeero shaqsiyadda. Waa mabda'a I-am-I, kaas oo daboolaya shakhsiyadda isla markaana qayb ahaan nolosha ka gala nolosha. Maskaxda hoose waa ka tarjumaadda maskaxda sarreysa ee ku jirta shakhsiyadda waana qaybtaas maskaxda sare ee ku dhexjirta. Waxa guud ahaan loo yaqaan maskaxda waa maskaxda hoose, taas oo ka shaqeysa maskaxda iyo maskaxda (maskaxda) dibedda.
Maskaxdu hadda waxay leedahay shan howleed. Kuwaani waxaa badanaa looga hadlaa sida urta, dhadhanka, maqalka, aragga, iyo taabashada ama dareenka, laakiin waxaa jira laba hawleed oo kale oo maskaxda ah oo aan guud ahaan loo aqoonin badanaaba looga hadlin sababta oo ah qaar badan oo aan isticmaalin ama la kulmin waayo-aragnimo badan. Waxaa adeegsada kaliya caafimadka ugu weyn kaliya isticmaalkooduna wuxuu dhameystiraa aadanaha. Labadan dareeme iyo howlaha maskaxdu waa aniga - aniga iyo I-a-nafta-adiga - adiga ayaa ah dareemka. Unugyada u dhigma ee loogu talagalay in lagu horumariyo howlahan ayaa ah jirdhiska wadnaha iyo qanjidhada caloosha hoostiisa, oo hadda qayb ahaan ah qofka caadiga ah. Xirfadaha, hadda lagu soo koobay oo keliya, waxay noqon doonaan aqoon iyo xikmad, garasho iyo ahaansho.
Maskaxda hoose waa inay ku midootaa shay, ha ahaato maskax sare ama mid kale oo leh dareenka iyo rabitaanka. Labadan dareen waa labada weji ee jacaylka. Midka caadiyan wuxuu kuxiran yahay dareenka iyo damacyada, waana waxa bini aadamka ugu yeeraan 'œlove'. Jacaylka sareeya ee aan badanaa loogu yeerin, waa maskaxda sare. Jacaylkani wuxuu ka go'an yahay dareenka iyo shakhsiyadda; Nuxurkeedu waa mabda'a sadaqada, naftiisa u dhiibashada mabaadi'da aan caqliga lahayn.
Sidee ayay maskaxdu u noqotaa addoonsiga dareenka, damacyada, jidhka, in kasta oo ay maanka ku haysaa uu abuuray oo ay waajib ku tahay inuu xukumo? Jawaabta waxaa laga helaa taariikhda hore ee maskaxda maskaxda. Tani waa tan: ka dib markii neefta maskaxdu ay abuurtay dareenka oo ay bilawday isticmaalkooda, dhalanteed ay soo saartay dareenka maskaxdu waxay kicisay inuu garto shakhsiyadda.
Qaybtaas shaqsiyanka ah oo loo yaqaan maskaxda hoose waxaa lagu afuufay shakhsiyadda (xayawaan) dhalashada. Jirku wuxuu u dhacaa si caadi ah iyadoo loo marayo neefsashada jirka, taas oo ah, maskaxda hoose ayaa jirka gala jirka iyadoo loo marayo neefsashada jirka, laakiin maahan neefta jirka. Neefsashada jidhka waxa keena neefsashada maskaxda, oo neefta maskaxdu waa maskaxda hoose. Neeftaas oo ah maskaxda sare, shaqsiyad ahaanta, waa waxa Kitaabka Quduuska ah loogu yeero pneuma quduuska ah, oo sidoo kale mararka qaar loo yaqaanno neefta ruuxiga ah. Isuma biiri doono ilaa uu qofku ka soo cusboonaado, oo ninku dib isu soo cusbooneysiinayo maxaa yeelay pneuma, si kale haddii loo yiraahdo, shaqsiyan buu dhameystiran yahay.
Maaddaama dunidu caarada caaroodka ay ku xadidan tahay shabakadda isweydaarsigeeda, sidaa darteed dunidan aadanaha adduunku waxay ku xaddidan tahay fikradaha wax masaakirta ah. Dunida shaqsiyaddu waa shaqo iskuxiran oo fikir ah oo uu shaqalaha ka dhaqaaqo kuna sii wado jilbajoogta. Caarada ayaa soo tuureysa dunyadeeda xirta oo ku xirta shay, mid kale, iyo mid kale, oo khadadkaas ku dhista dunidan. Maskaxdu waxay fidisaa qaabkeeda fikirka waxayna ku xiraysaa dadka, meelaha, iyo ujeedooyinka, iyo kuwan, iyada oo kuwan, iyada oo loo marayo fikradahan waxay ku dhistaa adduunkeeda. Maxaa yeelay, adduunyada nin walbaa waa isla xisaabtamo; Caalamkiisa ayaa ku kooban naftiisa; jecel yahay oo jecel yahay, jaahilnimadiisa iyo aqoontiisa ayaa xuddun u ah. Waxa uu ku nool yahay adduunkiisa gaarka ah, xududaha uu dhiso. Waxa uu rumeysan yahay inay tahay xaqiiqadu waa sawirada fikirka ee uu ku buuxiyo. Maaddaama webka laga takhalusi karo oo caarokuna uu weli u sii dhismayo mid kale, sidaas oo ay tahayna nolol kasta shakhsiyaddu waxay sababtaa in nafteeda loo dhiso sammo cusub, in kasta oo shakhsigu inta badan uusan ogayn.
Shakhsiyadda iyo shaqsiyad ahaanta waxaa loo isweydaarsadaa si isku mid ah sida loo heli karo marka laga tashanayo leiconsiyada inta badan la ansixiyay halkaas oo labadaba loo bixiyo macno ahaan caadooyinka iyo astaamaha maskaxda iyo jirka. Soosaarista ereyadan, si kastaba ha noqotee, waxay ka soo horjeedaan macnahooda. Shakhsiyadda waxaa laga soo qaatay perus-sonus, sanqadha, ama dhawaaqa. qof wuxuu ahaa maaskaro ay jilayaashu qadiimka ah xirtaan riwaayadoodii, taasna ay keentay inay gasho dharka oo dhan oo uu jilaa jilaa isagoo iska dhigaya dabeecad kasta. Shakhsiyaadku waxay ka yimaadaan kala qaybsanaan, aan la qaybin karin. Macnaha iyo xiriirinta ereyadan ayaa sidaas loo cadeeyay oo loo kala saarayaa.
Shakhsigu waa magac kaliya. Waxaa lagu dabaqi karaa caalamkoo dhan, adduunyo ama bini aadam, ama waxkasta oo matali kara mabda'a is-miidaanka.
Shakhsigu waa maaskaro, go ', dhar uu xirtay shaqsiyanka. Shaqsiyaddu waa dhaqale ahaan aan muuqan karin oo laga fikiro, hadlo, iyo ficilkeeda maaskaro ama shakhsiyaddiisa. Sida jilaa, shaqsiguna wuxuu ku gartaa labiskiisa iyo qayb ahaan marka ciyaartu bilaabato, iyo, caadiyan, waxay sii wadaa inay isu aqoonsato qaybta ayna ku ciyaarayso dhamaan falalka nolosha soo jeedda. Shakhsigu wuxuu ka kooban yahay nolosha iyo qaabka iyo galmada iyo rabitaanka, markii si sax ah loo habeeyo ama loo muujiyo, waxay ka kooban tahay mashiinka fikirka ee shaqsigu ku neefsanayo iyo habka uu u maleynayo.
Shakhsiyadda shakhsiyan waxaa ku dhex jira geed kaas oo, haddii shaqsiyad ahaanta, beerta, uu ku quudin doono oo uu jaan qaadi doono, wuu soo ururin karaa oo wuu cuni karaa laba iyo tobanka miro, oo sidaas ayuu ugu koray nolol aan dhiman. Shakhsigu waa qaab, labis, maaskaro, kaas oo shaqsigu u muuqdo qaybtana ka qaatay masiibada masiixiga-riwaayadaha-majaajillada ee da’da haatan lagu ciyaaro marxaladda adduunka. Shakhsigu waa xayawaan ay shaqsiyaddiisa, socdaalka da’da, ku aflagaadeysay adeegga oo haddii la quudiyo, la hago oo la xakameeyo, uu ku wado fuulista dariiqyada lamadegaanka iyo koritaanka kaymaha, guud ahaan meelaha qatarta ah, oo cidlada adduunka ah ilaa dalka nabadgelyada iyo nabadgelyada.
Shakhsigu waa boqortooyo, taas oo shaqsiyad ahaanta, boqorka, ay ku hareereysan yihiin wasiirradiisa, dareenka. Boqorka wuxuu ku fadhiyaa qolalka qalbiga. Isaga oo siiya kaliya codsiyada cadaaladda ah ee waxtar u leh maaddooyinkiisa ayaa boqorka wuxuu ka soo bixin doonaa kala-bax jahwareer, sharci iyo ficil isku xirnaan ah oo ka dhashay qalalaasaha iyo fallaagada, wuxuuna yeelan doonaa waddan nidaam iyo nidaamsan oo hagaagsan oo noole kasta oo xayawaan ahi ku sameeyo kaalintiisa danta guud. dalka.
Dib-u-dhiska shakhsiyadda kahor dhalashada iyo abaalgudka ay ku jirto hantida dhaxalka ah dhalashada kadib, waxaa si joogto ah loo soosaaray sameynta iyo horumarka adduunka oo laga soo bilaabo marxaladihiisa caafimaad, oo ay weheliso taariikhda da 'kasta. Shakhsiyan shaqsiyan waxaa ku dhexjirta shaqsiyanka - abuuraha, keydiyaha, iyo dib-u-abuuraha adduunka - ee kujira geerida kiimikada ee jirka. Aqoon isweydaarsigaan waxaa ku yaal maktabadda sixirka oo leh diiwaannadiisa da’da iyo horoscopeska mustaqbalka, waxaa jira digniino ay ka muuqdaan oo sixirbararka alkolada laga soo saari karo cunnooyinka jirku waa udub dhexaadka nolosha, nectar ilaahyada. Qolkan kiimikaad ee alkolojiyeha ayaa daaweyntu waxaa laga yaabaa inay ku xirto rabitaanka cuntada iyo damaca iyo rabitaanka shaqsiyadeed ee purgations, beddelaadda, iyo sublimations, oo loo yaqaan farshaxanka sixirka. Halkan wuxuu ku wareejiyaa birta aasaasiga ah ee damacyada iyo dabeecadiisa hooseysa ee qiiqa kaabayaasha oo loo adeegsado dahab saafi ah.
Halkan sixirbararka alkoholku wuxuu baabi'iyaa shaqada weyn, qarsoodiga da’da — in xayawaan loo beddelo nin iyo nin ilaa ilaah.
Shakhsigu waa qiimo aad u weyn. Haddii shakhsigu hadda burburi lahaa maxaa waligiis loo dhisaa maxaase loo oggol yahay inuu koro? Hadda hadda xaaladdeena hadda jirta, shakhsiyaddii waa la burburi lahaa ka dib mid ayaa ku dhici lahaa riyooyinkii cawlan ee habeen aan firfircoonayn, oo ah habeenka dunida, ama wuxuu ku dhex hurdayaa sanqadha duudduuban ee waara, ama waxaa loo goyn doonaa maxbuus aan dhimaneyn Waqti dhexyaalla, oo leh aqoon laakiin aan lahayn awood ay ku adeegsato; sculptor aan lahayn marmar ama chiisel; Dheryasameeyaha aan qummanayn ama aan dhoobada lahayn, neef aan dooneynin, jir ama qaab; ilaah la’aantiis.
Ninkii beerta lahaa wuxuu heli waayey miro la’aan geedkiisa; actor wuu ciyaari kari waayey qeybtiisa isagoon lebisi leheyn; socotada ma safri karin xoolihiisa mooyee; boqorkuna wuxuu noqon lahaa boqor la'aan boqortooyadiisa; saaxirku alchemistku ma shaqeyn karo sixir la'aantiisba. Laakiin geedku wuxuu dhali doonaa midho qadhaadh ama faa'iido aan lahayn, ama midho ma leh, la'aantiis ninkii beerta ka gooyay inuu gooyo; labiska ayaa noqon doona qaab la'aan ama qayb ciyaarta iyadoo aan jilaagu xidhnayn; xayawaanku garan maayo meeshuu aadayo socotada la'aanteed inay hagaan; Boqortooyadu way joogsan doontaa inay noqoto boqortooyo la'aan boqor aan xukumi karo; shaybaarku wuxuu ahaan doonaa wax aan faa'iido lahayn iyada oo aan saaxiriintu ka dhex shaqeynaynin.
Geedku waa noloshu, qaab dharka, dharka xayawaanka; Kuwani waxay qaadaan jidh jireed oo jinsi ah. Jirka oo dhan waa sheybaarka; shaqsiyaddu waa sixirbararka; fikirkuna waa hanaanka gudbinta. Noloshu waa dhista, qaabku waa qorshuhu, galmadu waa isku dheelitirka iyo isbarbardhiga, damacgu waa tamar, fikirka geedi socodka, iyo shaqsiyada qaab dhismeedka.
Waxaan si fudud u kala saari karnaa shakhsiyadda iyo shakhsiyadda qofka. Markaad ka fekereyso mawduuc akhlaaqeed oo muhiim ah anshax badan ayaa la maqli doonaa, mid walbana wuxuu isku dayayaa inuu sheegto dareenka isla markaana kuwa kale wuu quusiyaa. Kuwani waa codadka shaqsiyadda, iyo midka ugu codka badan sida caadiga ah wuu guuleysan doonaa. Laakiin marka qalbigu is-hoosaysiin ku weyddiisto runta, isla markiiba codkaas waxaa loo maqlaa si qumman oo ay wali muran ku jirto. Waa codka codsi ee qof gudaha ah - maskaxda sare, shaqsiyan.
Waa sabab, laakiin maaha habka loo yaqaan sababaynta. Waxay ku hadlaysaa laakiin hal mar mawduuc kasta. Haddii wareegyadeeda lagu dhaqmo waxaa soo baxaya dareen xoog iyo awood iyo hubinta in si sax ah wax loo qabtay. Laakiin haddii mid u istaago inuu doodo oo dhageysto codka caqliga hoose, markaa wuxuu noqonayaa wareer iyo jahwareer, ama isaga laftiisa ku khiyaaneeyo aaminaadda in mid ka mid ah codadka badan ay yihiin codka keliya. Haddii mid ka mid noqdo hal cod oo keliya ama uu diido inuu dhagaysto marka uu hadlayo, way joogsan doontaa inuu hadlo oo isagu ma yeelan doono dariiq uu si dhab ah uga ogaado waxa qaldan iyo waxa qaldan. Laakiin haddii mid dhagaysto fiiro gaar ah oo si adag u raaco waxa uu sheegayo, ka dib wuxuu baran karaa inuu lahadlo ilaahdiisa fal kasta oo muhiim ah, oo uu si nabad ah ugu socdo socod kasta oo nolosha ah ilaa uu noqdo shaqsi is-miyir-qaba. -Waxbarasho.